Faritany - Wikipedia
Ny faritany dia fitambaran' ny tanàna na toerana maromaro ao anatin' ny firenena iray, voatsinjara araka ny toetra ifandraisan' izy ireo, toy ny toetrandro, ny vokatry ny fambolena, ny fomban-drazana ary ny fiteny.
Io teny malagasy hoe faritany io no andikana ny teny frantsay hoe province. Ny teny hoe province dia avy amin' ny teny latina hoe provincia, izay foronin' ny tovona hoe pro- ("ho ana") sy ny fototeny hoe vincere ("mamatotra"). Misy ny milaza fa midika hoe "mandresy" ny teny latina hoe vincere. Ny "provincia" dia fizaràm-paritra tao amin' ny Repoblika Rômana, avy eo tao amin' ny Empira Rômana amin' ny tany any ivelan' i Italia.
Faritany manam-piandrianana ao amin' ny fanjakana federaly
Ao amin' ny fanjakana federaly fehezina araka ny federalisma, misy ny lamina ara-pitsarana an-toerana ao amin' ny federasiona izay mizaka tena amin' ny lafiny lalàm-panorenana sady manana ny fiandrianan' ny antenimieram-paritany manokana araka ny fitsinjarana ny fahefana (ohatra: ny faritany any Kanada na ny fanjakana tsirairay any Etazonia).
Faritany tsy manam-piandrianana ao amin' ny firenena mampiray
Amin' ireo fanjakana mampiray tsy fehezin' ny federalisma dia ampiasaina koa ny teny hoe faritany mba hanondroana ny fizaràna ara-pitantanan-draharaham-panjakana tsy manana fizakan-tena manokana mitaha amin' ny fitondram-pankana an' ny firenena (ohatra: ny faritany any Sina).
Faritany tsy manam-piandrianana ao amin' ny fanjakana federaly
Ankoatr' izany, ny firenena sasany dia mety lazaina hoe fanjakana federaly nefa tsy manome ny governemanta isan-toerana ny anjarany fahefana tokony ho azy araka ny lalàm-panorenana federallista, hany ka ny faritany ao amin' ireo firenena ireo dia toy ny fitsinjaram-paritra ho an' ny fitantanan-draharaham-panjakana. Federasiona tsy misy federallisma izany.
Faritany eto Madagaskara
Misy faritany enina eto Madagasikara. Tsy vondom-bahoaka itsinjaram-pahefana izy ireo, sahala amin'ny distrika eto Madagasikara koa. Ny faritra, izay miisa 23 (22 teo aloha) no nasolo azy ireo.
Faritra eto amin'ny tany
Dernière modification le 4 Oktobra 2021, à 10:59
Accueil Au hasard À proximité Connexion Configuration Fanomezana Mombamomba ny Wikipedia Fampitandremana